VERY OLOMANGA NY FARITRA MELAKY : Maty nisy nitifitra ny Talen’ny kabinetra teo aloha
Maty nisy nitifitra nandritra ny fotoana niasany teny amin’ny toerana fiasany i Franco Danni Talen’ny kabinetran’ny Faritra Melaky teo aloha, afak’omaly tolak’andro tokony tamin’ny 4 ora sy sasany teo ho eo. Tao amin’ny Fokontany Ambiky Distrikan’i Maintirano no nitrangan’ny loza. 3 octobre 2017
Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana dia andian-jiolahy efatra nirongo basy roa no nitifitra azy io avy hatrany teo imason’ireo mpiasa niaraka taminy teo amin’ilay tany, ka maty tsy tra-drano i Franco Danni. Tsy nokitihin’ireo jiolahy ilay mpiasa fa io tompon-toerana io ihany no tena tadiavin’izy ireo, araka ny fitantaran’ireo nanatri-maso. Nifanenjehan’izy efatra nirongo basy ity mpiasam-panjakana teo aloha ity ka tsy navelan’izy ireo raha tsy lavon’ny balan’izy ireo ny lehilahy ary maty tsy tra-drano. Nitsoka kiririoka ireo mpiasany vao nahita ny tranga ka vory avy hatrany ireo olona manodidina.
Tafaporitsaka anefa izy efatra nahavanon-doza ireo. Voalaza fa bala miisa enina teo ho eo no hita teny amin’ny vatan’ity mpiasam-panjakana teo aloha ity. Efa eo am-panaovana fanadihadiana lalina ity tranga ity ankehitriny ireo mpitandro filaminana ao Maintirano. Misaona tanteraka ny mponina any an-toerana ankehitriny.
Araka ny loharanom-baovao dia ahiana ho resaka ady tany no antony namonoana an’i Franco Danni. Voalaza ihany koa fa mpanao sira ny lehilahy ary io toerana iasany io dia tany itambarana amin’ny fianakaviana. Efa namonjy ny biraon’ny Polisy tany an-toerana ny lehilahy nilaza fa misy olana izy amin’ny tany iasany io. Tokony niverina tao amin’ny kaomisarian’ ny Polisy ity farany, ny alatsinainy faha-25 septambra lasa teo. Tsy tonga tao anefa ny lehilahy tamin’izany, araka ny tatitra vaoray avy any an-toerana ihany.
Tamin’izao ora nanoratanay izao dia mbola tsy nahazoana vaovao mikasika ireo nahavanon-doza ny mpitandro filaminana any an-toerana. Nalevina omaly maraina tao an-tampon-tanànan’i Maintirano ihany ny vata mangatsiakany, izay toerana fiaviany ary natrehan’ireo mpiasam-panjakana rehetra any an-toerana ny fandevenana azy.
Olona iray nosamborin’ny mpitandro filaminana
Lehilahy iray mifanakaiky amin’i Franco Danni no nosamborin’ny mpitandro filaminana rehefa avy nandevina. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia vao nandre ny famonoana an’io Talen’ny kabinetra Faritra Melaky teo aloha ity ny lehilahy avy hatrany nanevateva ireo mpitandro filaminana tao an-toerana. “Tsy manao ny asany nareo mpitandro filaminana ireo, tsy misy ilaivana anareo.
Ahoana ny tsy hafehezana ny tranga toy izao miseho eto an-tampon-tanàna”, hoy ity lehilahy iray ity. Tsy nifidy ny lehilahy fa ny Polisy sy ny Zandary dia notevatevainy avokoa noho ny hafenon’ny fony be lotra. Nahita iny fisamboarana iny ny vahoaka sasany avy nandevina dia nirodona niaraka nihazo ny biraon’ny Polisy nitaky amin’ny hamoahana azy. Navoakan’ny mpitandro filaminana avy hatrany ity farany saingy tsy maintsy miverina ny alakamisy ho avy izao eny amin’ny biraon’ny Polisy ao Maintirano ihany ny tenany, raha ny vaovao voaray ihany.